Fossil Sport: famantaranandro voalohany miaraka amin'ny Snapdragon Wear 3100 | Androidsis
Eder Ferreño | | Fitaovana Android, SmartWatch
Mitombo hatrany ny tsenan'ny smartwatch, miaraka amin'ny fahatongavan'ireo tolo-kevitra vaovao. Wear OS dia manohy mitady ny toerana misy azy eny an-tsena, ary ny fahatongavan a fikirakirana toy ny Snapdragon Wear 3100 dia fampisondrotana iray hafa ho an'ity sehatra ity. Ary farany, androany isika dia efa mahita famantaranandro vaovao izay manana an'ity processeur sy ny rafitra miasa ity. Momba ny Sport Fossil.
Izy io no lasa famantaranandro voalohany namoaka ity processeur Qualcomm ity, be dia be ny endrika ankehitriny. Ny Fossil Sport dia aseho amin'ny famataranandro miaraka amin'ny hatsarana kanto, maoderina ary madio madio, nefa mampanantena ny hanaraka tanteraka ny sehatra teknika, vokatr'ity fanodinana ity.
Ny famolavolana dia lafiny iray lehibe amin'ny famantaranandro, izay miavaka indrindra amin'ny fampiasana loko. Hisy habe dial roa misy, 41 sy 43 milimetatra, hofidian'ny mpampiasa. Mikasika ny loko kosa dia ahitantsika safidy amin'ny manga, volondavenona, mena, mavokely sy maitso. Ka misy zavatra ho an'ny tsirairay amin'ity famantaranandro ity. Eo amin'ny fehy ihany koa ity fandokoana ity sy ny safidy maro no ampiharina, satria hisy fehy 28 hafa ho an'ity Fossil Sport ity.
Ampy ny angon-drakitra amin'ity famantaranandro ity izay mbola tsy nomen'ny orinasa azy manokana. Voalaza fa handeha ity Fossil Sport ity manomeza fahaleovan-tena iray andro amin'ny vidiny iray. Raha mampiasa ny maody fitehirizana isika dia roa andro ity fizakan-tena ity. Raha ny fiasa no jerena dia mahita GPS izahay, sensor amin'ny tahan'ny fo ary fiasa hafa hitantsika amin'ny famantaranandro natao ho an'ny fanatanjahan-tena.
Mifanaraka amin'ny andrasana ny fifanarahana, satria ho afaka hampiasa azy io amin'ny telefaona Android misy dikanteny mitovy na avo kokoa noho KitKat 4.4, raha mifanaraka amin'ny kinova iOS 9.3 na avo kokoa. Amin'izao fotoana izao dia United Kingdom no tsena voalohany sy tokana izay nanamafisana ny fandefasana azy.
Hivoaka amin'ny fomba ofisialy eto amin'ny firenena izy amin'ny 12 Novambra, amin'ny vidiny 249 pounds, izany hoe 285 euro eo ho eo no hiova. Hihaino tsara ny fandefasana an'ity Fossil Watch any amin'ny tsena hafa any Eropa ity isika, zavatra tokony hitranga amin'ny herinandro ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Fossil Sport: Manaova OS sy Snapdragon Wear 3100 ho an'ity finday ity
Raha manana Galaxy S8 na Note 8 ianao, dia lany amin'ny One UI, ny interface interface vaovao an'ny Samsung
Samsung dia manao hadalana amin'ny fifaninanana rehetra miaraka amin'ny "notch"